Chemical Chigadzirwa Chekugadzira Gadzira
6 Mibvunzo Nezve Afatinib paAnti-Caners (NSCLC)
Chii chinonzi Afatinib? Patinoda Afatinib? Afatinib Inoshanda Sei? Aive Afatinib Yakagamuchirwa neDFA? Chokwadi Ndeipi Njodzi / Matambudziko Anounzwa neAfatinib? Ndezvipi Zvimwe Zvekutsvaga Nezve Afatinib? Chii chinonzi Afatinib? Afatinib (CAS: 439081-18-2) chirongwa chakanangwa chekurapa icho chinonziwo Giotrif Iyo inoshandiswa kurapa isiri-diki kenza yemapapu kenza (NSCLC) […]
Chii chinonzi Regorafenib? Nei Regorafenib Yakagamuchirwa neDFA? Regorafenib Inoshanda Sei? Chii chinonzi Regorafenib Main Inoshandiswa? Ndeapi mabhenefiti eReorafenib akaratidzirwa muZvidzidzo? Ndeapi Ngozi / Matambudziko anounzwa naRegorafenib May? Ini ndinochengeta sei uye / kana kukanda kunze Regorafenib? Ramangwana mafambiro eRegorafenib Mhedziso Chii chinonzi Regorafenib? Regorafenib (CAS: 755037-03-7), […]
Nzwisisika Sumo pane "Lung Cancer Muurayi" Gefitinib
Gefitinib Overview Gefitinib Mechanism of action Gefitinib Use In the World Side Effects of Gefitinib Gefitinib Storage More Rearch: "Lung Cancer Killer" Gefitinib Gefitinib Overview Gefitinib is kinase inhibitor.Makemikari zita re gefitinib ndi 4-Quinazolinamine N- (3 4-fluorophenyl) -7-methoxy-6- [3- (4-morpholinyl) propoxy] .Gefitinib ine iyo molecular fomula C22H24ClFN4O3, iri hama mamorekuru mashoma e446.9 daltons uye iri chena-chena poda. […]
Zvinotarisirwa Zvinodhaka ye lymphoma inotarisirwa zvinodhaka. Mishonga yakanangwa inovavarira kuuraya rudzi rwechitokisi chakachinja kenza kana kumira zviratidzo zvinoita kuti maseru egomarara akure kana […]
Nootropic Coluracetam: Maitiro Ekushanda paBongo uye Bata Kunetseka
Racetam Mhuri yeNootropic- Coluracetam Coluracetam (BCI-540, kana MKC-231) ineootropic ine mafuta-akatsiga mu racetam-kirasi yemakomponi. Coluracetam yakanyanya kusimba kupfuura iyo yekutanga racetam, Piracetam. Coluracetam yakapihwa patent neMitsubishi Tanabe Pharma yekuJapan muna 2005. Kuiita imwe yetsva dzeracetam-based nootropics. Iyo patent yeColuracetam yakazotengeswa kuBrainCells, […]